China karazana Cryogenogenika mahomby avo lenta ny nitrogen rivotra fisarahana zavamaniry mpamokatra ranoka sy oxygen mpanamboatra sy mpamatsy | OR
Karazan-tsarimihetsika cryogenika avo lenta mahomby amin'ny rivotra madio fisarahana zavamaniry mpamokatra ranoka sy oxygen
Fahadiovana O2 ≥99.6% O2
O2 pression ~ 0.034MPa (G)
Fahadiovana N2 ≤10ppmO2
Tsindry N2 ~ 0,012 MPa (G)
Status famoahana vokatra (amin'ny 0 ℃, 101.325Kpa)
Fanombohana tsindry 0.65MPa (G)
Ny vanim-potoana fandehanana mitohy eo anelanelan'ny roa volana sy tapany faha-12 volana
Fotoana fanombohana ~ 24 Ora
Fanjifana herinaratra manokana ~ 0.64kWh / mO2 (tsy ampidirina. Compresseur O2)
Ny rivotra madio dia avy amin'ny rivotra, mandalo sivana rivotra amin'ny fanesorana vovoka sy vovo-mekanika hafa ary miditra amin'ny compressor de non-lub hofehezin'ny compressor dingana roa eo ho eo. 0.65MPa (g) .Mandeha mangatsiaka kokoa izy io ary miditra ao anaty singa misy presooling mba hampangatsiatsiaka hatramin'ny 5 ~ 10 ℃. Avy eo dia mandeha amin'ny switch-over MS purifier izy mba hanesorana ny hamandoana, CO2, hidrôzenina karbonika. Ny mpanadio dia misy sambo mololo sivana feno molekiola roa. Ny iray dia ampiasaina raha toa ka eo am-panavaozana ny azota ny azota fako avy amin'ny boaty mangatsiaka ary amin'ny alàlan'ny fanamainana heater.
Rehefa avy nodiovina, ny ampahany kely aminy dia ampiasaina ho toy ny entona mitondra turbine expander, ny hafa kosa miditra anaty boaty mangatsiaka mba hampangatsiaka ny reflux (oxygen madio, azota madio ary nitroka fako) ao amin'ny exchanger hafanana lehibe. Ny ampahany amin'ny rivotra dia esorina amin'ny tapany afovoan'ny mpanova hafanana lehibe ary mandeha amin'ny turbine fanitarana ho an'ny famokarana sery. Ny ankamaroan'ny rivotra mivelatra dia mandeha amin'ny alàlan'ny subcooler izay ampangatsiahan'ny oxygen avy amin'ny tsanganana ambony mba hatolotra ny tsanganana ambony. Ny ampahany kely aminy dia mandalo bypass mba handany ny fantsom-pitokanana azota mivantana ary averina haverina hivoaka ny boaty mangatsiaka. Ny faritra hafa amin'ny rivotra kosa dia mbola mangatsiatsiaka hatrany akaikin'ny rivotra mangatsiaka alaim-panahy hidina ambany.
Amin'ny rivotra tsanganana ambany dia misaraka sy misotro rano toy ny azota azota sy rivotra misy ranoka ny rivotra. Ny ampahany amin'ny azota azota dia nalaina avy teo an-tampon'ny tsanganana ambany. Ny rivotra misy ranoka aorian'ny subcooled sy throttled dia hatolotra amin'ny tapany afovoan'ny tsanganana ambony ho toy ny reflux.
Ny oksizenina vokatra dia alaina avy amin'ny tapany ambany amin'ny tsanganana ambony ary ampiakarina indray amin'ny alàlan'ny rivotra miitatra, ny fifanakalozana hafanana lehibe. Avy eo dia atolotra ivelan'ny tsanganana. Ny azota fako dia alaina avy amin'ny tapany ambony amin'ny tsanganana ambony ary averina atsangana amin'ny subcooler sy ny exchanger hafanana lehibe hivoaka ny tsanganana. Ny ampahany amin'izany dia ampiasaina ho toy ny entona famerenana ho an'ny mpanadio MS. Ny azota madio dia esorina avy eo an-tampon'ny tsanganana ambony ary arotsaka ao anaty rivotra ranoka, subcooler azota azota ary mpanondrana hafanana lehibe hafindra avy ao amin'ilay tsanganana.
Oksizenina avy ao amin'ny tsanganana distillation dia ateraky ny mpanjifa.
Previous: Ny zavamaniry oksizenina cryogenika dia mitaky famokarana oksizenina ranoka
Manaraka: Karazana kriogenika karazana alikaola fisarahana bitika kely indostria mpamokatra azota mpamokatra argon generator
Generator Oksigena avo lenta
Generator Nitrogen avo lenta